Guji waddamada khariidada si aad u akhrido warka tareenada Romania, waddada iyo wadada gawaarida ee Yurub!
Bozankaya33 Milyan Euro Tramway loo dhoofiyo Romania
Bozankaya iyo Dawladda Hoose ee Timiaraoara waxay saxeexday heshiis 16 milyan oo euro ah oo loogu talagalay bixinta alaabada sagxadda hoose ee 33. Keenista bilowga ahi waxay bilaabmi doontaa bilaha 18 gudaheed muddada qandaraasku waxay ku dhamaan doontaa bilaha 48. Bozankaya'S [More ...]
dhoofisaa horeysay Turkey ee gaariga rail BozankayaWaxay soo saari doontaa 16% 100 trams dabaqa hoose oo loogu talagalay magaalada Timişoara, Romania. Iyada oo la raacayo ikhtiyaarka dheeriga ah ee 24, amarkan waxaa la filayaa in la dhammeeyo ilaa 40. Koronto ee Ankara [More ...]
TEMSA, oo jidka ku sii heysay waddammada 15 ee adduunka, ayaa ku guuleysatay hindis aad u weyn Romania. TEMSA, guuleystaha qandaraaska oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arimaha Gudaha ee Romania, [More ...]
Geedaha Warshadaha iyo Ganacsiga Alsim Alarko iyo Ganacsiga Inc. ayaa ku guulaystay qandaraaska dhismaha qaybta koonfureed ee wadada giraan Bucharest. Qiimaha Jirka ee kiloomitir 17 kiilo mitir oo ka mid ah wadada giraanta marka laga reebo VAT 830 milyan 679 kun 662 [More ...]